Wasiir Wacad oo Sheegay Xogta Kulankii Madaxweyne Deni Iyo Inuu Balan Qaad U sameeyey Muhim Ah | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Wasiir Wacad oo Sheegay Xogta Kulankii Madaxweyne Deni Iyo Inuu Balan Qaad U sameeyey Muhim Ah
Wasiirka arrimaha dibadda Xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ka warbixiyay safar iyaga oo koox Wasiirro ah ay ku tageen Magaalada Boosaaso islamarkaana kula kulmeen Madaxweyne Deni.
Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in ay halkaas u tageen sidii la isugu soo dhaweyn lahaa dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Maamulka Puntland.
Wasiir Cawad ayaa sheegay in Deni uu u ballanqaaday in uu diyaar u yahay la shaqeynta dowladda Federaalka ah sidoo kalena uu yareynta khilaafaadka kala dhaxeeya dowladda.
Axmed ayaa intaas ku daray in kulankii ay la yeesheen Madaxweynaha Puntland uu filayo in uu guul ku soo dhamaaday.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda isku dayday in Siciid Deni laga hor istaago ka qeybgalka Caleema saarka Axmed Madoobe taas oo aan lagu guuleysan.
Safarka Wasiirrada Xukuumadda dhexe waxaa qeyb kahaa Wasiirrada Qorsheynta,arrimaha dibadda,Kalluumeysiga,lataliyaha amaanka Madaxweynaha iyo xubno kale.
Previous articleWaji Is Diidan oo Kismaayo Isku Arkaya & Xaalada
Next articleDAAWO VIDEO:Madaxweyne Deni “Dowlada faderalka Midnimo Bay Rabta waxaana ka Shaqeynayna Midnimadaasi Iyo Heshisinta Kala Aragti Duwanaanta Jubbaland.
Mayonge October 10, 2019 At 4:24 pm
dhamaantoid kuwa taga Kismaaywaxay Imaaraadka ka haystaan balanqaad lacageed. Wacayaa ogeyn Dubai inay recession ku jirto o.o ay culeyso ku tahay Abu Dhabi
Xaaladaha ku tiirsan soo saarida shidaalka mustaqbil mugdi ah bet u jeedaan sababtoo ah Tecknolijiyadii waxay isu bedeleysaa isticmaalka beteriga taasoi keentay in Soomaaliya o.o bad iyo beriba leh dhaqaale aan kala go ay inay gartaan
Wadani October 10, 2019 At 7:06 pm
Walaaloow Deni waan ku baryeenaa Kismaayo ha tagin. Formaajo waxuu diyaar kula yahay wax kasto aad sheegato.
Walaaloow waan ku baryeenaa. Cali Salebaan, Dishiishle anagaa ka qabaneyaan ee warkeena si fiican u fahay.
Fanax October 10, 2019 At 8:36 pm
Mayonge sxb UAE hanti qaran oo aan la qayaasi karin baa u kaydsan oo waana iska xoreynayaan baahiday u qabeen dahabka madow. Waxay maal gashanayaan hantiyo ma guuraan ah oo dunida iyo dalkoodoo dhan uga sugnaanaya. Hana halmaamina inay Majeerteeniya oo dhan taariikh ahaan isku xirnaayeen khaliijka carabta khaas ahaan markay ganacsiga iyo dhaqaalaha noqoto. Xiriir uga gaar ah Soomaaliya inteeda kale baa ka dhexeeya aan sahal ku dhamaan karin. Marka carabtoo dhan la isku qayaaso imaaraatigu waa kuwa oogu firfircoon oo uguna hormarsan arimaha ganacsiga caalamka iyo maal gashiga. Dad ka fiican oo lagu xiran karo soomaaloo dili uga ma sokeeyo. Daaya nac nacda iyo dacaayada khaliga ah.
Fanax October 10, 2019 At 8:50 pm
Waddani sxb Puntland iyo Jubbaland maahan dad iyo dawlado loo kala abtirin karo. Mana ahan dad siyaasad lagu kala xadi karo wax kastoo dhaca maxaa yeelay mar kasta danahooda oo idil baa isku xiran. Indha adayg waa kaaga oo kale markaa nin Cismaan Maxamuud ah iyo tolkiisa bahweynta MJ saas ugu kala abtirinayso. Yaa tahay adigu markaa Siciid Deni ku leedahay kuwaa reer bariga waan ka qabanayaa? Yaa kuu fasaxay inaad Deni iyo Farmaajo iyo Madoobe dhexdooda isku kakabiso? Booskee baa kaaga bannaan sxb? Garoowe iyo Kismaayo waa isaga muuqdaan Xamar iyo inta magaalo oo u dhexeeya. Waa garataan filayaa warkaygaas? Jooji faduusha iyo fowdada sxb dadkani dhexdoodu kuma deeqdee.